အပိုငျး ၂၁ - BookCubicle
Tran by- xian yu
ကဒီလြှံရဲ့စိနျချေါတဲ့စကားက ဂငျြခနျြကိုဒေါပှစသေညျ။ ကဒီလြှံကိုအထငျသေးစှာကွညျ့နလေကျြ သူပွနျပွောလိုကျသညျ။
“အရငျရကျက ငါမငျးကိုအနိုငျယူခဲ့ပွီးပွီ။ အခုမငျးက ငါ့ကိုစိနျချေါရဲသေးတယျပေါ့”
အရငျဘ၀ကသူသုံးနကေလြသေံအတိုငျး အခုဂငျြခနျြရဲ့လသေံမှာ အထငျသေးမှုတှအေပွညျ့ပါနတေယျ။ သူကမတျောတဆဖွဈပွီးပွနျမှေးဖှားလာခဲ့တာတောငျမှ အခြို့အကငျြ့တှကေတော့ရှိနဆေဲပဲ။
ဂငျြခနျြပွောတာကိုကွားရပွီးတဲ့အခါ ကဒီလြှံရဲ့မကျြနှာဟာ သလေုအောငျဖွူဖြော့သှားသညျ။ သူ့မကျြလုံးထဲမှာ ဒေါသတှပေျေါထှကျလာနပေမေယျ့ သူစာကွညျ့တိုကျရဲ့စညျးကမျးတှကေိုတော့ မခြိုးဖောကျရဲသေးပေ။ ဒါ့အပွငျ ဂငျြခနျြရဲ့တိုကျခိုကျတာကိုခံထားရသညျမှာလဲ သိပျမကွာသေးဘူးမဟုတျလား….
ကဒီလြှံရဲ့ဘေးမှာရပျနတေဲ့ ကဒီကှငျတောငျမှဒေါသတှထှေကျနတေယျ။ ဂငျြခနျြကိုစိုကျကွညျ့ရငျး သူမလှောငျလိုကျသညျ။
“ဟမျ့ နငျငါ့အကို စိနျချေါတာကိုလကျမခံရဲဘူးမဟုတျလား။ နငျယောင်ျကြားမှ ဟုတျရဲ့လား”
ကဒီကှငျပွောတာကိုကွားမှ ကဒီလြှံ့မကျြနှာတောကျပလာကာ စိတျသကျစာရာရသှားသလို ခံစားလိုကျရသညျ။
“ဟုတျတယျ။ ငါစိနျချေါတာကိုလကျမခံ၇ငျ မငျးကသူရဲဘောကွောငျလို့ပဲ။ ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ ငါမငျးကိုတိုကျခိုကျရေးကှငျးပွငျမှာစောငျ့နမေယျ။ မငျးကိုယျမငျးငကွောကျလို့ထငျရငျ မလာခဲ့နဲ့။ ညီမသုံး တိုကျခိုကျရေးကှငျးပွငျကိုသှားရအောငျ”
အဲ့ဒိနောကျမှာတော့ ကဒီလြှံဟာ ဂငျြခနျြကိုတဈခကျြစူးခနဲကွညျ့လိုကျပွီး စာကွညျ့တိုကျကနေ ထှကျသှားတော့သညျ။
“ဟမျ့ ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ နငျလာတာကောငျးမယျ။ နငျကငကွောကျဆိုရငျတောငျ လူသိအောငျတော့မပွသငျ့ဘူး” ကဒီကှငျကအျောပွောကာ သူမအကိုနောကျပွေးလိုကျသှားတော့သညျ။
“ခငျြးယနျ ရှငျးတနျဆိုတာ လူသဈပွိုငျပှဲမှာ ပထမရသှားတဲ့ကောငျမဟုတျလား”
“ကွညျ့ရတာတော့ ဟုတျမယျထငျတယျ။ ငါကွားတာတော့ ခငျြးယနျ ရှငျးတနျက သူတျောစငျအဆငျ့၈ပဲရှိသေးတာတဲ့ ဒါမယျ့ကှာ သူကသူတျောစငျအဆငျ့၉တှကေိုတောငျ အနိုငျယူပဈတာ။ ဘယျလောကျမိုကျလဲ”
ကဒီကှငျတို့ထှကျသှားပွီးတဲ့နောကျ စာကွ့ညျ့တိုကျထဲမှာ ဂငျြခနျြ့အကွောငျးကိုသာပွောနကွေလတေယျ။
ဂငျြခနျြ့ဘေးနားမှာ ထိုငျနတေဲ့မိနျးမလှလေးတောငျမှ သူ့ကိုအရမျးအံ့သွနတေဲ့အမူအယာဖွငျ့ကွညျ့နတေယျ။ သူမမကျြလုံးတှကေ စိတျလှုပျရှုားစှာ တဖကျြဖကျြခတျနတေယျ။ သူမတကယျမမြှျောလငျ့မိခဲ့ဘူး ဒီကောငျက ကြောငျးသားသဈဘုရငျဆုရခဲ့တာတဲ့လား….
အရုပျဆိုးတဲ့မကျြနှာအမူအယာဖွငျ့ ဂငျြခနျြ သူ့လကျထဲကစာအုပျကိုဖဈြညှဈထားသညျ။ ကဒီကလနျကအသုံးမကတြဲ့မောငျနှမနှဈယောကျက သူ့ကိုလာရှုပျနတေယျ။ သူစာဘယျလိုဆကျဖတျနိုငျတော့မလဲ။ ထပျတှေးရရငျ ဒီလိုစိနျချေါခံရမှတော့ ဂငျြခနျြလကျမခံလို့ဘယျရပါတော့မလဲ။ သူကသူ့ဂုဏျသိက်ခာကိုသိပျဂရုမစိုကျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူကခငျြးယနျကလနျကလူဖွဈနတေယျ။ သူ့အကိုကအနားမှာမရှိပမေယျ့ သူ ခငျြးယနျဟူကိုတော့ ငကွောကျညီတဈယောကျမရစခေငျြပါဘူး။
ထိုငျခုံကနဖွေညျးညငျးစှာထရပျလိုကျရငျး စားပှဲပျေါကသူဖတျဖို့ယူထားတဲ့စာအုပျတှကေိုကောကျယူလိုကျတယျ။ စာအုပျစငျမှာ သပျသပျရပျရပျနှငျ့စနဈတကပြွနျစီလိုကျပွီးတဲ့နောကျ သူစာကွညျ့တိုကျကနထှေကျသှားဖို့ပွငျလိုကျသညျ။ အဲ့ဒိအခြိနျမှာတဈခနျးလုံးက ဂငျြခနျြရဲ့လှုပျရှုားမှုသေးသေးလေးကိုတောငျ အလှတျမပေးဘဲကွညျ့နကွေတယျ။
“ဟေ့ ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ”
ဂြှငျခနျြစာကွညျ့တိုကျ ဂိတျဝရောကျတဲ့အခြိနျမှာ သူ့ဘေးကမိနျးမလှလေးသူ့ကို လှမျးချေါလိုကျသံကိုကွားလိုကျရသညျ။ သူအံ့အားသငျ့စှာဖွငျ့ ကောငျမလေးကိုကွညျ့လိုကျသညျ။
ဂငျြခနျြ့အသံနအေသံထားနဲ့စကားကိုကွားတော့ ကောငျမလေးကဘာမှမပွောသေးခငျ နှုတျခမျးစူလိုကျသညျ။
“ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ နငျလကေ့ငျြ့ရေးကှငျးထဲကိုသှားပွီးတော့ စိနျချေါတာကိုလကျခံမလို့လား”
“နငျသှားဖို့မလိုပါဘူး။ စာကွညျ့တိုကျက ဆူညံအောငျလုပျတာကို တားမွဈထားတယျ။ နငျလုပျရမှာက ဒီအကွောငျးကို ကြောငျးအုပျကွီးကို သှားပွောလိုကျဖို့ပဲ။ အဲ့ဒါဆိုရငျ သူတို့နှဈယောကျ သခြောပေါကျအပွဈပေးခံရမှာ။ ဒီခါဂဲအကယျဒမီမှာ ဘယျသူမှကြောငျးအုပျကွီးကို အထှနျ့မတကျရဲဘူး”
သူမပွောတာတှကွေားတော့ ဂငျြခနျြ ဒီကောငျမလေးကိုတောကျပစှာကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ခပျပေါ့ပေါ့ရယျလကျြကပဲ
“သူတို့က စိနျချေါနမှေတော့ ငါကလကျမခံလို့ ဘယျဖွဈမလဲ” ဟုပွနျပွောကာ စာကွညျ့တိုကျကနထှေကျသှားတော့တယျ။
ဂငျြခနျြ့ပုံရိပျပြောကျသှားသညျကိုကွညျ့နပွေီးမှ သူမမကျြလုံးတှေ တလကျလကျတောကျပလာလတေယျ။ ခဏလောကျတုံ့ဆိုငျးနပွေီးတော့ သူမထိုငျနခေဲ့တဲ့စားပှဲဆီပွနျသှားကာ စာအုပျိကိုယူလိုကျပွီး စငျပျေါစနဈတကပြွနျထားလိုကျတယျ။ နောကျ စာကွညျ့တိုကျဂိတျဝဆီမွနျမွနျပွေးသှားကာ ပွိုငျပှဲကှငျးပွငျဆီထှကျသှားတော့တယျ။
ကောငျမလေးထှကျသှားပွီးတဲ့နောကျ စာကွညျ့တိုကျတဈခုလုံးခဏလောကျ ငွိမျကသြှားသညျ။ နောကျ ရုတျတရကျ အသံကယျြကွီးတဈခုထှကျလာသညျ။
“ဒါစိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ပှဲပဲ။ သူတျောစငျအဆငျ့၈ပဲရှိသေးတဲ့လူသဈလေးက အဆငျ့၉ကလူကိုတိုကျမယျ့ပှဲ၊ သှားမကွညျ့တဲ့သူက ရူးနလေို့ပဲဖွဈမှာ”
ကြောငျးဝတျစုံဝတျထားတဲ့ ဆယျကြျောသကျကောငျလေးက စာကွညျ့တိုကျထဲကနအေမွနျပွေးထှကျသှားတယျ။
ဒီလူတှထှေကျသှားပွီးတဲ့နောကျ ကနျြတဲ့ကြောငျးသူ၊ကြောငျးသားတှဟော သူတို့ယူထားတဲ့စာအုပျတှကေို စငျတှပေျေါ စနဈတကပြွနျထားပွီး ပွိုငျပှဲကှငျးပွငျဆီအမွနျပွေးသှားတော့တယျ။
အားကစားကှငျးရဲ့ထောငျ့တဈနရောတှငျ ပွိုငျပှဲကှငျးပွငျရှိသညျ။ စကျဝိုငျးပုံစငျမွငျ့၅ခုရှိကာ တဈခုဆီကိုမီတာ၂၀ကယျြဝနျးသညျ။ ပွိုငျပှဲကှငျးကသိပျမကွီးတာမို့ ပှဲကွညျ့ပရိတျသတျ၁၀၀လောကျသာ ဆနျ့နိုငျသညျ။ သို့ပမေယျ့ လူသဈပွိုငျပှဲ့ပွီးခဲ့တာမကွာသေးသညျမို့ ပွငျဆငျထားလကျြသားဖွဈသညျ။
ဂငျြခနျြ ပွိုငျပှဲကှငျးပွငျကိုရောကျတော့ စငျမွငျ့တဈခုပျေါမှာ လကျပိုကျကာရပျနတေဲ့ ကဒီလြှံကိုတနျးမွငျလိုကျသညျ။ စငျအောကျမှာတော့ ဆူညံစာံတှတျထိုးနတေဲ့ကြောငျးသားတှရှေိသညျ။
ဂငျြခနျြရောကျလာတာမွငျတော့ စငျမွငျ့ပျေါရပျနတေဲ့ ကဒီလြှံကလှောငျသညျ။
“မငျးလိုငကွောကျကို ငါကမလာရဲဘူးတောငျ ထငျနတောကှ”
ဂငျြခနျြ နှာမှုတျကာ စငျမွငျ့ပျေါခုနျတကျလိုကျသညျ။ လကျပိုကျကာရပျနလေိုကျပွီးအထငျသေးတဲ့အကွညျ့နှငျ့ ကဒီလြှံအားအေးစကျစှာပွောလိုကျသညျ။
“ငါ့ကိုလာတိုကျ။ ငါမငျးကို၁၀ကှကျ အကွောပေးမယျ။ အဲ့၁၀ကှကျအတှငျး ငါလုံးဝွပနျမတိုကျဘူး”
ဂငျြခနျြပွောတာကိုကွားရသညျ့ပရိတျသတျတှသေညျ အံ့သွလှနျးလို့အျောဟဈမိမတတျဖွဈသှားရသညျ။ ထိုလူတှထေဲတှငျ စီနီယာကြောငျးသားတှလေညျးပါဝငျသညျ။ သူတို့တှခေဏလောကျငွိမျနပွေီး ဂငျြခနျြ့အကွောငျးကိုခပျတိုးတိုးဆှေးနှေးကွတော့သညျ။ သူတို့ထငျခဲ့တာက ပွိုငျပှဲမှာကဒီလြှံရှုံးသှားခဲ့သညျက ဒီကောငျနမျောနမဲ့နိုငျသှားလို့ပေါ့…..
ကဒီလြှံမကျြနှာဟာ ဒေါသကွောငျ့နီရဲတကျလာသညျ။ ဒီခငျြးယနျ ရှငျးတနျဟာ သူ့ကိုပွိုငျဘကျတဈယောကျအနဖွေငျ့တောငျ မမွငျပါလား….
“ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ မငျးကငါထငျထားတာထကျကို အရှကျမရှိတာပဲ”
“ကဒီလြှံမငျးငါ့ကိုတိုကျခငျြတာဆို မွနျမွနျလာတိုကျလေ။ ငါ့မှာအခြိနျမရှိဘူး”
“ဘာတှအေလငျြလိုနတောလဲ။ လာကွညျ့တဲ့သူတှပွေညျ့တဲ့အထိ စောငျ့လိုကျပါဦး။ ဒါမှ ငါမငျးကိုနိုငျတဲ့အခါ မကျြမွငျသကျသတှေရှေိမှာ”
သူဘာလို့ဒီလိုပွောရသလဲဆိုတော့ လူသဈပွိုငျပှဲမှာသူရှုံးသှားတုနျးက ဂငျြခနျြကခဏလေးနဲ့သူ့ကိုအနိုငျယူလိုကျတာလေ… သူ့ဖငျကိုကနျခကျြတဈခကျြတညျး သုံးပွီးအနိုငျယူခဲ့တာ။ သူ့အတှကျတော့ အဲ့ဒိကနျခကျြကို ဘယျတော့မှမမှေ့ာမဟုတျဘူး။ ကဒီလြှံအမွငျမှာတော့ သူရှုံးခဲ့တာက သူနမျောနမဖွဈသှားခဲ့လို့ပဲ။ သူ့အလှညျ့မှာတော့ ဂငျြခနျြ့ကိုရကျရကျစကျစကျအနိုငျယူပွီး ဂုဏျသိက်ခာတှပွေနျဆယျရမယျ။
တဖွေးဖွေးကှငျးပွငျထဲမှာလူတှပွေညျ့လာသညျ။ တိုးပှားလာသညျ့ဦးရဟော ရပျသှားမညျ့ဟနျတော့မရှိ။ အပွငျမှာတော့ ပွိုငျပှဲကှငျးဆီလာနတေဲ့လူအုပျကွီးတှရှေိသညျ။ ဒီပွိုငျပှဲကို ကဒီလြှံကတ၇ားဝငျကွငွောထားခဲ့သညျကိုး….
အခြိနျအနညျးငယျကွာပွီးနောကျမှာ ပွိုငျပှဲကှငျးပွငျတှငျ အနညျးဆုံးလူ၂၀၀နီးပါးရှိနပွေီဖွဈတယျ။ လူတှအေားလုံးဟာ စိတျလှုပျရှုားစှာစောငျ့မြှျောနကွေတယျ။ အဲ့ဒိလူတှထေဲမှာ ကဒီလြှံရဲ့အကို ကဒီယနျလညျးပါတယျ။ သူ့ဘေးမှာတော့လူအနညျးငယျဝိုငျးကာရပျနတေယျ။
“ညီလေး မငျးလုပျနိုငျပါတယျ။ အကိုကွီးစောငျ့ကွညျ့နမေယျ”
ရုတျတရကျ ရငျးနှိးတဲ့အသံတဈသံဟာ လူအုပျကွီးရဲ့ဆူညံသံတှကေိုဖွတျပွီးထှကျလာတယျ။
ဂငျြခနျြလိုကျရှာကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ သူ့အကိုကွီး ခငျြးယနျဟူ ကကှငျးထဲမှာရပျပွီးသူ့ကိုအားပေးနတောတှေ့၇တယျ။
“လာ လာ ဘယျသူနိုငျမယျဆိုတာ ငါတို့လောငျးကွရအောငျ။ ဘယျသူလောငျးရဲကွလဲ”
“ငါက ခငျြးယနျ ရှငျးတနျကို ရှပွေား၂၀လောငျးတယျ”
ကဒီလြှံနဲ့ဂငျြခနျြတို့ကို ဘယျသူနိုငျမယျဆိုပွီးလောငျးတဲ့သူတှမြေားလာတယျ။ အမြားစုဟာ မွငျ့မွတျတဲ့မိသားစုတှကေမို့ အတျောလောငျးနိုငျကွတယျ။ ကဒီလြှံကိုလောငျးကွတဲ့သူတှကေ ၈၀ရာခိုငျနှုနျးလောကျရှိပွီး ဂငျြခနျြကိုလောငျးတဲ့သူတှကေတော့ ၂၀ရာခိုငျနှုနျးပဲရှိတယျ။
“purple coin၁၀ပွား ခငျြးယနျရှငျးတနျဘကျကလောငျးတယျ”
ငှတှေတေငျထားတဲ့စားပှဲကိုလကျဝါးဖွငျ့ ရိုကျခလြိုကျရငျး ခငျြးယနျဟူလောငျးလိုကျသညျ။
“ခငျြးယနျ ရှငျးတနျဘကျကို purple coin ၁၀ပွားလောငျးတယျ”
နှုးညံ့တဲ့အသံလေးထှကျလာကာ ဂငျြခနျြဘကျကိုလောငျးလိုကျသညျကို အားလုံးမွငျလိုကျကွရသညျ. သူမဟာ သခြောပေါကျမွငျ့မွတျသညျ့ မိသားစုမှဖွဈရမညျကို သိနိုငျသညျ။ လူတှနေားမလညျနိုငျကွသညျက ဒီမိနျးမလှလေးက ဘယျလိုကွောငျ့ဂငျြခနျြဘကျကလောငျးရတာလဲ ဆိုတာကိုပါပဲ။
ကဒီလြှံရဲ့မကျြနှာဟာ ယုံကွညျမှုတှပွေညျ့နတေယျ။ သူလှောငျကာပွောလာသညျ။
“ခငျြးယနျ ရှငျးတနျ မငျးငါ့ကို ၁၀ကှကျအကွောပေးမယျလို့ပွောခဲ့တယျနျော။ မငျးစကားမငျးမှတျမိတယျမလား”
“မွငျ့မွတျတဲ့စိတျထားရှိသူတဈယောကျအနနေဲ့ သူ့ပါးစပျကထှကျသမြှက ကတိပဲ။ ငါမငျးကို၁၀ကှကျအကွောပေးမှာပါ”
ဂငျြခနျြပွောတဲ့စကားကို သူသခြောမသိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုတော့ သူသဘောပေါကျလိုကျတယျ။
သူဘာစကားမှမပွောတော့ဘဲ ဂငျြခနျြကိုစတိုကျလိုကျတယျ။ သူ့ကို၁၀ကှကျအကွောပေးထားတဲ့ဟာ သူကဘာလို့အားအမြားကွီး မသုံးရမှာလဲ။
ကဒီလြှံ ဂငျြခနျြ့ဆီကိုပွေးသှားကာ လကျထီးဖွငျ့ထိုးခလြိုကျသညျ။ လသေံလေးတဈခကျြတောငျမကွားရတဲ့အထိ လကျသီးကလငျြမွနျစှာဝငျသှားသညျ။ မကျြနှာနားနီးကပျလာတဲ့လကျသီးကို ကပျသီးလေးရှောငျလိုကျသညျမို့ ဂငျြခနျြခွတေဈလှမျး နောကျဆုတျသှားရသညျ။ ဒီလကျသီးခကျြက သူ့ကိုခွတေဈလှမျးသာနောကျဆုတျစဖေို့လုံလောကျသညျ။
“ဒီခငျြးယနျ ရှငျးတနျက အားသိပျမရှိပါဘူးကှာ။ တိုကျပှဲစစခငျြးမှာကို သူကအထိုးခံရတော့မလို့။ သူသာမရှောငျနိငျခဲ့ဘူးဆိုရငျ ဒဏျ၇ာရပွီးအနိုငျအရှုံးကကှဲပွားသှားမှာ”
“ဒီခငျြးယနျ ရှငျးတနျက ကံသိပျကောငျးနတော”
ကှငျးပွငျထဲကလူအမြားစုကတော့ ဂငျြခနျြ ကဒီလြှံရဲ့လကျသီးကိုရှောငျနိုငျလိုကျသညျမှာ ကံကောငျးမှုကွောငျ့ဟုထငျနသေညျ။
လူတဈခြို့ကသာ ဒါဟာကံကောငျးမှုမဟုတျမှနျး ရိပျမိကွကာ ဂငျြခနျြအား စိတျဝငျတစားကွညျ့လိုကျကွသညျ။
ကဒီလျှံရဲ့စိန်ခေါ်တဲ့စကားက ဂျင်ချန်ကိုဒေါပွစေသည်။ ကဒီလျှံကိုအထင်သေးစွာကြည့်နေလျက် သူပြန်ပြောလိုက်သည်။
“အရင်ရက်က ငါမင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးပြီ။ အခုမင်းက ငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရဲသေးတယ်ပေါ့”
အရင်ဘ၀ကသူသုံးနေကျလေသံအတိုင်း အခုဂျင်ချန်ရဲ့လေသံမှာ အထင်သေးမှုတွေအပြည့်ပါနေတယ်။ သူကမတော်တဆဖြစ်ပြီးပြန်မွေးဖွားလာခဲ့တာတောင်မှ အချို့အကျင့်တွေကတော့ရှိနေဆဲပဲ။
ဂျင်ချန်ပြောတာကိုကြားရပြီးတဲ့အခါ ကဒီလျှံရဲ့မျက်နှာဟာ သေလုအောင်ဖြူဖျော့သွားသည်။ သူ့မျက်လုံးထဲမှာ ဒေါသတွေပေါ်ထွက်လာနေပေမယ့် သူစာကြည့်တိုက်ရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုတော့ မချိုးဖောက်ရဲသေးပေ။ ဒါ့အပြင် ဂျင်ချန်ရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံထားရသည်မှာလဲ သိပ်မကြာသေးဘူးမဟုတ်လား….
ကဒီလျှံရဲ့ဘေးမှာရပ်နေတဲ့ ကဒီကွင်တောင်မှဒေါသတွေထွက်နေတယ်။ ဂျင်ချန်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်း သူမလှောင်လိုက်သည်။
“ဟမ့် နင်ငါ့အကို စိန်ခေါ်တာကိုလက်မခံရဲဘူးမဟုတ်လား။ နင်ယောင်္ကျားမှ ဟုတ်ရဲ့လား”
ကဒီကွင်ပြောတာကိုကြားမှ ကဒီလျှံ့မျက်နှာတောက်ပလာကာ စိတ်သက်စာရာရသွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။
“ဟုတ်တယ်။ ငါစိန်ခေါ်တာကိုလက်မခံ၇င် မင်းကသူရဲဘောကြောင်လို့ပဲ။ ချင်းယန် ရှင်းတန် ငါမင်းကိုတိုက်ခိုက်ရေးကွင်းပြင်မှာစောင့်နေမယ်။ မင်းကိုယ်မင်းငကြောက်လို့ထင်ရင် မလာခဲ့နဲ့။ ညီမသုံး တိုက်ခိုက်ရေးကွင်းပြင်ကိုသွားရအောင်”
အဲ့ဒိနောက်မှာတော့ ကဒီလျှံဟာ ဂျင်ချန်ကိုတစ်ချက်စူးခနဲကြည့်လိုက်ပြီး စာကြည့်တိုက်ကနေ ထွက်သွားတော့သည်။
“ဟမ့် ချင်းယန် ရှင်းတန် နင်လာတာကောင်းမယ်။ နင်ကငကြောက်ဆိုရင်တောင် လူသိအောင်တော့မပြသင့်ဘူး” ကဒီကွင်ကအော်ပြောကာ သူမအကိုနောက်ပြေးလိုက်သွားတော့သည်။
“ချင်းယန် ရှင်းတန်ဆိုတာ လူသစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရသွားတဲ့ကောင်မဟုတ်လား”
“ကြည့်ရတာတော့ ဟုတ်မယ်ထင်တယ်။ ငါကြားတာတော့ ချင်းယန် ရှင်းတန်က သူတော်စင်အဆင့်၈ပဲရှိသေးတာတဲ့ ဒါမယ့်ကွာ သူကသူတော်စင်အဆင့်၉တွေကိုတောင် အနိုင်ယူပစ်တာ။ ဘယ်လောက်မိုက်လဲ”
ကဒီကွင်တို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် စာကြ့ည့်တိုက်ထဲမှာ ဂျင်ချန့်အကြောင်းကိုသာပြောနေကြလေတယ်။
ဂျင်ချန့်ဘေးနားမှာ ထိုင်နေတဲ့မိန်းမလှလေးတောင်မှ သူ့ကိုအရမ်းအံ့သြနေတဲ့အမူအယာဖြင့်ကြည့်နေတယ်။ သူမမျက်လုံးတွေက စိတ်လှုပ်ရှုားစွာ တဖျက်ဖျက်ခတ်နေတယ်။ သူမတကယ်မမျှော်လင့်မိခဲ့ဘူး ဒီကောင်က ကျောင်းသားသစ်ဘုရင်ဆုရခဲ့တာတဲ့လား….
အရုပ်ဆိုးတဲ့မျက်နှာအမူအယာဖြင့် ဂျင်ချန် သူ့လက်ထဲကစာအုပ်ကိုဖျစ်ညှစ်ထားသည်။ ကဒီကလန်ကအသုံးမကျတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်က သူ့ကိုလာရှုပ်နေတယ်။ သူစာဘယ်လိုဆက်ဖတ်နိုင်တော့မလဲ။ ထပ်တွေးရရင် ဒီလိုစိန်ခေါ်ခံရမှတော့ ဂျင်ချန်လက်မခံလို့ဘယ်ရပါတော့မလဲ။ သူကသူ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကချင်းယန်ကလန်ကလူဖြစ်နေတယ်။ သူ့အကိုကအနားမှာမရှိပေမယ့် သူ ချင်းယန်ဟူကိုတော့ ငကြောက်ညီတစ်ယောက်မရစေချင်ပါဘူး။
ထိုင်ခုံကနေဖြည်းညင်းစွာထရပ်လိုက်ရင်း စားပွဲပေါ်ကသူဖတ်ဖို့ယူထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ စာအုပ်စင်မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်စနစ်တကျပြန်စီလိုက်ပြီးတဲ့နောက် သူစာကြည့်တိုက်ကနေထွက်သွားဖို့ပြင်လိုက်သည်။ အဲ့ဒိအချိန်မှာတစ်ခန်းလုံးက ဂျင်ချန်ရဲ့လှုပ်ရှုားမှုသေးသေးလေးကိုတောင် အလွတ်မပေးဘဲကြည့်နေကြတယ်။
“ဟေ့ ချင်းယန် ရှင်းတန်”
ဂျှင်ချန်စာကြည့်တိုက် ဂိတ်ဝရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘေးကမိန်းမလှလေးသူ့ကို လှမ်းခေါ်လိုက်သံကိုကြားလိုက်ရသည်။ သူအံ့အားသင့်စွာဖြင့် ကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်သည်။
ဂျင်ချန့်အသံနေအသံထားနဲ့စကားကိုကြားတော့ ကောင်မလေးကဘာမှမပြောသေးခင် နှုတ်ခမ်းစူလိုက်သည်။
“ချင်းယန် ရှင်းတန် နင်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းထဲကိုသွားပြီးတော့ စိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံမလို့လား”
“နင်သွားဖို့မလိုပါဘူး။ စာကြည့်တိုက်က ဆူညံအောင်လုပ်တာကို တားမြစ်ထားတယ်။ နင်လုပ်ရမှာက ဒီအကြောင်းကို ကျောင်းအုပ်ကြီးကို သွားပြောလိုက်ဖို့ပဲ။ အဲ့ဒါဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက် သေချာပေါက်အပြစ်ပေးခံရမှာ။ ဒီခါဂဲအကယ်ဒမီမှာ ဘယ်သူမှကျောင်းအုပ်ကြီးကို အထွန့်မတက်ရဲဘူး”
သူမပြောတာတွေကြားတော့ ဂျင်ချန် ဒီကောင်မလေးကိုတောက်ပစွာကြည့်လိုက်မိသည်။ ခပ်ပေါ့ပေါ့ရယ်လျက်ကပဲ
“သူတို့က စိန်ခေါ်နေမှတော့ ငါကလက်မခံလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ” ဟုပြန်ပြောကာ စာကြည့်တိုက်ကနေထွက်သွားတော့တယ်။
ဂျင်ချန့်ပုံရိပ်ပျောက်သွားသည်ကိုကြည့်နေပြီးမှ သူမမျက်လုံးတွေ တလက်လက်တောက်ပလာလေတယ်။ ခဏလောက်တုံ့ဆိုင်းနေပြီးတော့ သူမထိုင်နေခဲ့တဲ့စားပွဲဆီပြန်သွားကာ စာအုပ်ိကိုယူလိုက်ပြီး စင်ပေါ်စနစ်တကျပြန်ထားလိုက်တယ်။ နောက် စာကြည့်တိုက်ဂိတ်ဝဆီမြန်မြန်ပြေးသွားကာ ပြိုင်ပွဲကွင်းပြင်ဆီထွက်သွားတော့တယ်။
ကောင်မလေးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် စာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးခဏလောက် ငြိမ်ကျသွားသည်။ နောက် ရုတ်တရက် အသံကျယ်ကြီးတစ်ခုထွက်လာသည်။
“ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲပဲ။ သူတော်စင်အဆင့်၈ပဲရှိသေးတဲ့လူသစ်လေးက အဆင့်၉ကလူကိုတိုက်မယ့်ပွဲ၊ သွားမကြည့်တဲ့သူက ရူးနေလို့ပဲဖြစ်မှာ”
ကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးက စာကြည့်တိုက်ထဲကနေအမြန်ပြေးထွက်သွားတယ်။
ဒီလူတွေထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် ကျန်တဲ့ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ယူထားတဲ့စာအုပ်တွေကို စင်တွေပေါ် စနစ်တကျပြန်ထားပြီး ပြိုင်ပွဲကွင်းပြင်ဆီအမြန်ပြေးသွားတော့တယ်။
အားကစားကွင်းရဲ့ထောင့်တစ်နေရာတွင် ပြိုင်ပွဲကွင်းပြင်ရှိသည်။ စက်ဝိုင်းပုံစင်မြင့်၅ခုရှိကာ တစ်ခုဆီကိုမီတာ၂၀ကျယ်ဝန်းသည်။ ပြိုင်ပွဲကွင်းကသိပ်မကြီးတာမို့ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်၁၀၀လောက်သာ ဆန့်နိုင်သည်။ သို့ပေမယ့် လူသစ်ပြိုင်ပွဲ့ပြီးခဲ့တာမကြာသေးသည်မို့ ပြင်ဆင်ထားလျက်သားဖြစ်သည်။
ဂျင်ချန် ပြိုင်ပွဲကွင်းပြင်ကိုရောက်တော့ စင်မြင့်တစ်ခုပေါ်မှာ လက်ပိုက်ကာရပ်နေတဲ့ ကဒီလျှံကိုတန်းမြင်လိုက်သည်။ စင်အောက်မှာတော့ ဆူညံစာံတွတ်ထိုးနေတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိသည်။
ဂျင်ချန်ရောက်လာတာမြင်တော့ စင်မြင့်ပေါ်ရပ်နေတဲ့ ကဒီလျှံကလှောင်သည်။
“မင်းလိုငကြောက်ကို ငါကမလာရဲဘူးတောင် ထင်နေတာကွ”
ဂျင်ချန် နှာမှုတ်ကာ စင်မြင့်ပေါ်ခုန်တက်လိုက်သည်။ လက်ပိုက်ကာရပ်နေလိုက်ပြီးအထင်သေးတဲ့အကြည့်နှင့် ကဒီလျှံအားအေးစက်စွာပြောလိုက်သည်။
“ငါ့ကိုလာတိုက်။ ငါမင်းကို၁၀ကွက် အကြောပေးမယ်။ အဲ့၁၀ကွက်အတွင်း ငါလုံးဝြပန်မတိုက်ဘူး”
ဂျင်ချန်ပြောတာကိုကြားရသည့်ပရိတ်သတ်တွေသည် အံ့သြလွန်းလို့အော်ဟစ်မိမတတ်ဖြစ်သွားရသည်။ ထိုလူတွေထဲတွင် စီနီယာကျောင်းသားတွေလည်းပါဝင်သည်။ သူတို့တွေခဏလောက်ငြိမ်နေပြီး ဂျင်ချန့်အကြောင်းကိုခပ်တိုးတိုးဆွေးနွေးကြတော့သည်။ သူတို့ထင်ခဲ့တာက ပြိုင်ပွဲမှာကဒီလျှံရှုံးသွားခဲ့သည်က ဒီကောင်နမော်နမဲ့နိုင်သွားလို့ပေါ့…..
ကဒီလျှံမျက်နှာဟာ ဒေါသကြောင့်နီရဲတက်လာသည်။ ဒီချင်းယန် ရှင်းတန်ဟာ သူ့ကိုပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်အနေဖြင့်တောင် မမြင်ပါလား….
“ချင်းယန် ရှင်းတန် မင်းကငါထင်ထားတာထက်ကို အရှက်မရှိတာပဲ”
“ကဒီလျှံမင်းငါ့ကိုတိုက်ချင်တာဆို မြန်မြန်လာတိုက်လေ။ ငါ့မှာအချိန်မရှိဘူး”
“ဘာတွေအလျင်လိုနေတာလဲ။ လာကြည့်တဲ့သူတွေပြည့်တဲ့အထိ စောင့်လိုက်ပါဦး။ ဒါမှ ငါမင်းကိုနိုင်တဲ့အခါ မျက်မြင်သက်သေတွေရှိမှာ”
သူဘာလို့ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့ လူသစ်ပြိုင်ပွဲမှာသူရှုံးသွားတုန်းက ဂျင်ချန်ကခဏလေးနဲ့သူ့ကိုအနိုင်ယူလိုက်တာလေ… သူ့ဖင်ကိုကန်ချက်တစ်ချက်တည်း သုံးပြီးအနိုင်ယူခဲ့တာ။ သူ့အတွက်တော့ အဲ့ဒိကန်ချက်ကို ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကဒီလျှံအမြင်မှာတော့ သူရှုံးခဲ့တာက သူနမော်နမဖြစ်သွားခဲ့လို့ပဲ။ သူ့အလှည့်မှာတော့ ဂျင်ချန့်ကိုရက်ရက်စက်စက်အနိုင်ယူပြီး ဂုဏ်သိက္ခာတွေပြန်ဆယ်ရမယ်။
တဖြေးဖြေးကွင်းပြင်ထဲမှာလူတွေပြည့်လာသည်။ တိုးပွားလာသည့်ဦးရေဟာ ရပ်သွားမည့်ဟန်တော့မရှိ။ အပြင်မှာတော့ ပြိုင်ပွဲကွင်းဆီလာနေတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေရှိသည်။ ဒီပြိုင်ပွဲကို ကဒီလျှံကတ၇ားဝင်ကြေငြာထားခဲ့သည်ကိုး….
အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာ ပြိုင်ပွဲကွင်းပြင်တွင် အနည်းဆုံးလူ၂၀၀နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ လူတွေအားလုံးဟာ စိတ်လှုပ်ရှုားစွာစောင့်မျှော်နေကြတယ်။ အဲ့ဒိလူတွေထဲမှာ ကဒီလျှံရဲ့အကို ကဒီယန်လည်းပါတယ်။ သူ့ဘေးမှာတော့လူအနည်းငယ်ဝိုင်းကာရပ်နေတယ်။
“ညီလေး မင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကိုကြီးစောင့်ကြည့်နေမယ်”
ရုတ်တရက် ရင်းနှိးတဲ့အသံတစ်သံဟာ လူအုပ်ကြီးရဲ့ဆူညံသံတွေကိုဖြတ်ပြီးထွက်လာတယ်။
ဂျင်ချန်လိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့အကိုကြီး ချင်းယန်ဟူ ကကွင်းထဲမှာရပ်ပြီးသူ့ကိုအားပေးနေတာတွေ့၇တယ်။
“လာ လာ ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတာ ငါတို့လောင်းကြရအောင်။ ဘယ်သူလောင်းရဲကြလဲ”
“ငါက ချင်းယန် ရှင်းတန်ကို ရွှေပြား၂၀လောင်းတယ်”
ကဒီလျှံနဲ့ဂျင်ချန်တို့ကို ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုပြီးလောင်းတဲ့သူတွေများလာတယ်။ အများစုဟာ မြင့်မြတ်တဲ့မိသားစုတွေကမို့ အတော်လောင်းနိုင်ကြတယ်။ ကဒီလျှံကိုလောင်းကြတဲ့သူတွေက ၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီး ဂျင်ချန်ကိုလောင်းတဲ့သူတွေကတော့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။
“purple coin၁၀ပြား ချင်းယန်ရှင်းတန်ဘက်ကလောင်းတယ်”
ငွေတွေတင်ထားတဲ့စားပွဲကိုလက်ဝါးဖြင့် ရိုက်ချလိုက်ရင်း ချင်းယန်ဟူလောင်းလိုက်သည်။
“ချင်းယန် ရှင်းတန်ဘက်ကို purple coin ၁၀ပြားလောင်းတယ်”
နှုးညံ့တဲ့အသံလေးထွက်လာကာ ဂျင်ချန်ဘက်ကိုလောင်းလိုက်သည်ကို အားလုံးမြင်လိုက်ကြရသည်. သူမဟာ သေချာပေါက်မြင့်မြတ်သည့် မိသားစုမှဖြစ်ရမည်ကို သိနိုင်သည်။ လူတွေနားမလည်နိုင်ကြသည်က ဒီမိန်းမလှလေးက ဘယ်လိုကြောင့်ဂျင်ချန်ဘက်ကလောင်းရတာလဲ ဆိုတာကိုပါပဲ။
ကဒီလျှံရဲ့မျက်နှာဟာ ယုံကြည်မှုတွေပြည့်နေတယ်။ သူလှောင်ကာပြောလာသည်။
“ချင်းယန် ရှင်းတန် မင်းငါ့ကို ၁၀ကွက်အကြောပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။ မင်းစကားမင်းမှတ်မိတယ်မလား”
“မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ပါးစပ်ကထွက်သမျှက ကတိပဲ။ ငါမင်းကို၁၀ကွက်အကြောပေးမှာပါ”
ဂျင်ချန်ပြောတဲ့စကားကို သူသေချာမသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုတော့ သူသဘောပေါက်လိုက်တယ်။
သူဘာစကားမှမပြောတော့ဘဲ ဂျင်ချန်ကိုစတိုက်လိုက်တယ်။ သူ့ကို၁၀ကွက်အကြောပေးထားတဲ့ဟာ သူကဘာလို့အားအများကြီး မသုံးရမှာလဲ။
ကဒီလျှံ ဂျင်ချန့်ဆီကိုပြေးသွားကာ လက်ထီးဖြင့်ထိုးချလိုက်သည်။ လေသံလေးတစ်ချက်တောင်မကြားရတဲ့အထိ လက်သီးကလျင်မြန်စွာဝင်သွားသည်။ မျက်နှာနားနီးကပ်လာတဲ့လက်သီးကို ကပ်သီးလေးရှောင်လိုက်သည်မို့ ဂျင်ချန်ခြေတစ်လှမ်း နောက်ဆုတ်သွားရသည်။ ဒီလက်သီးချက်က သူ့ကိုခြေတစ်လှမ်းသာနောက်ဆုတ်စေဖို့လုံလောက်သည်။
“ဒီချင်းယန် ရှင်းတန်က အားသိပ်မရှိပါဘူးကွာ။ တိုက်ပွဲစစချင်းမှာကို သူကအထိုးခံရတော့မလို့။ သူသာမရှောင်နိင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒဏ်၇ာရပြီးအနိုင်အရှုံးကကွဲပြားသွားမှာ”
“ဒီချင်းယန် ရှင်းတန်က ကံသိပ်ကောင်းနေတာ”
ကွင်းပြင်ထဲကလူအများစုကတော့ ဂျင်ချန် ကဒီလျှံရဲ့လက်သီးကိုရှောင်နိုင်လိုက်သည်မှာ ကံကောင်းမှုကြောင့်ဟုထင်နေသည်။
လူတစ်ချို့ကသာ ဒါဟာကံကောင်းမှုမဟုတ်မှန်း ရိပ်မိကြကာ ဂျင်ချန်အား စိတ်ဝင်တစားကြည့်လိုက်ကြသည်။
Pann Khatt Waii 13.12.2019, 12:15 5